मानक व्हीलचेयर - मानक वजन व्हीलचेयर | कर्मान हेल्थकेयर
घर / म्यानुअल व्हीलचेयर / मानक व्हीलचेयर
कुनै पनि सीट आकार16 "सीट18 "सीट
कुनै उत्पादन वजन19.1 पाउण्ड - 25 पाउण्ड25.1 पाउण्ड - 35 पाउण्ड35.1 एलबीएस वा अधिक
कुनै पनि प्रयोगकर्ता वजन१ .250 .१ एलबीएस वा कम
मानक व्हीलचेयर बनाम हल्का व्हीलचेयर
फोल्ड गर्न सजिलो मानक वजन व्हीलचेयर
यदि तपाइँ एक बलियो र टिकाऊ फ्रेम संग एक मानक व्हीलचेयर को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो मानक व्हीलचेयर मा एक नजर राख्नुहोस्। बस्ने गाइड संयन्त्र को अधिकांश एक कम प्रतिरोधी नायलॉन//G GF १५% वा माथि आर्थिक सिटिंग मा नवीनतम को लागी निर्माण गरीएको हो।
हाम्रो व्हीलचेयर सहित धेरै बिभिन्न सुविधाहरु मा थप्न को लागी आउँछ विकल्प र सामान जुन तपाइँको आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्दछ। धेरै मानक कुर्सीहरु एक इस्पात फ्रेम संग बनाइन्छ। मानक म्यानुअल व्हीलचेयर आजको बजार मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने व्हीलचेयर हुन्। मानक व्हीलचेयर ३५ एलबीएस भन्दा बढी वजन। अगाडि riggings बिना, उनीहरु एक सीट चौडाइ र १ and र २० इन्च को बीच गहिराई छ, र निश्चित वा अलग गर्न सकिने armrests छ।
सही मानक वजन व्हीलचेयर छनौट?
एक मानक व्हीलचेयर छनौट सबै भन्दा राम्रो निर्णय गरीन्छ जब प्रयोगकर्ता जो कुर्सी संचालन गरी रहन्छ जीवन शैली गतिविधिहरु, दैनिक आधारमा कुर्सी को उपयोग गरीनेछ समय को मात्रा, र उनीहरुको हालत को स्थिति र मापदण्ड सहित आफ्नो तत्काल आवश्यकताहरु मापन गर्दछ।
बिभिन्न शर्तहरु ह्वीलचेयर को प्रकार तपाइँलाई आवश्यकता पर्नेछ, तपाइँको आवश्यकताहरु र गतिशीलता को स्तर मा निर्भर गर्दछ। पूर्ण समय व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु दैनिक गतिविधिहरु र जीवनशैली विकल्पहरु मा निर्भर गर्दछ, अंशकालिक प्रयोगकर्ताहरु को तुलना मा व्हीलचेयर को एक फरक प्रकार को आवश्यकता हुन सक्छ।
हामी बजार मा सबै भन्दा राम्रो मानक वजन व्हीलचेयर छ। तपाइँ किन्न सक्नुहुन्छ हल्का फोल्डिंग व्हीलचेयर देश मा अग्रणी व्हीलचेयर निर्माता बाट। हामी पनि प्रदान गर्दछौं अल्ट्रा हल्का व्हीलचेयर कि तह र भण्डारण गर्न सजिलो छ। लाइट व्हीलचेयर सामान्यतया एल्युमिनियम बाट बनेको हुन्छ तर कहिले काँहि स्टील बाट वा दुबै धातुहरु को एक संयोजन बाट, जुन तिनीहरुको मानक वजन भन्दा कम मात्रा मा हुन्छ।
लाइट व्हीलचेयर यस वर्ग मा सामान्यतया २ - - ३४ पाउण्ड बाट तौल। हामी धेरै यस व्हीलचेयर यस दायरा मा र राम्रो २ bs पाउण्ड तल साथै अल्ट्रालाइट तौल व्हीलचेयर श्रेणी भित्र बाट छनौट गर्न को लागी छ। यदि यो हो भने हल्का तपाइँ खोज्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो नयाँ 14.5 lb फ्रेम को बारे मा सोध्नुहोस् ईर्गो फ्लाइट.
Karman मा, हामी १०० भन्दा बढी मोडेल, प्रकार, को विविधताहरु छन् हल्का फोल्डिंग व्हीलचेयर बाट छनौट गर्न। हामी सहित म्यानुअल व्हीलचेयर को एक ठूलो चयन छ हल्का ढुवानी व्हीलचेयर, मानक व्हीलचेयर, हल्का व्हीलचेयर, अल्ट्रा लाइटवेट व्हीलचेयर, एर्गोनोमिक व्हीलचेयर र अधिक। एक श्रेणी, मोडेल, र or वा यहाँ सम्म कि मूल्य बिन्दु को चयन अन्तिम प्रयोगकर्ता को लागी "कला को राज्य" गतिशीलता उत्पादनहरु लाई पूर्ण रूपमा सराहना गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। हामी तपाइँ आराम, गतिशीलता र प्रतिस्पर्धी विकल्पहरु मा तपाइँको आजीवन उपयोग को लागी एक उत्तम कुर्सी खोज्न प्रतिबद्ध छौं। हामी Karman मा यहाँ छौं र तपाइँको हरेक आवश्यकता को लागी समर्पित छ।
एक हल्का व्हीलचेयर तह यो सजिलो कहिल्यै भएको छैन!
सबै व्हीलचेयर साथी संग ह्यान्डल मानक संग आउँछ। अधिकांश १ 16 ″ वा १″ ″ सीट चौडाइ को रूप मा उपलब्ध छन्। एक व्हीलचेयर र्‍याम्प मा पैतृक गर्न सजिलो। धेरैजसो कुर्सीहरु डेस्क-लम्बाइ armrest प्याड छन्। केहि व्हीलचेयर मोडेलहरु फ्लिप ब्याक armrests संग कुर्सी ढुवानी धेरै सजिलो बनाउँछ विशेष गरी एक कार को ट्रंक मा वा कुनै अन्य भण्डारण स्थान बनाउँछ। स्विंग टाढा अलग गर्न सकिने खुट्टा आराम पनि थप गतिशीलता विकल्प र उपयोग को आसानी प्रदान गर्दछ। बेरिएट्रिक व्हीलचेयर वा भारी शुल्क मोडेलहरु। हाम्रो अनुकूली वा नुस्खा आधारित बेरिएट्रिक को बारे मा सोध्नुहोस् यदि KM-8520F20 र KM-8520F22 कुनै विशेष आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्दैन वा हाम्रो जाँच गर्नुहोस् बीटी-10 मोडेल।
तपाइँ हाम्रो उत्पाद साहित्य बाट हाम्रो पोर्टेबल हल्का व्हीलचेयर को बारे मा अधिक जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ, यो फ्लायर सहित:
मानक वजन व्हीलचेयर फ्लायर
मानक म्यानुअल व्हीलचेयर सबैभन्दा किफायती छ?
मानक व्हीलचेयर सबैभन्दा आधारभूत र प्रवेश स्तर हो। धेरैजसो हल्का धातुहरु को सट्टा कडा इस्पात बाट बनेका छन्। प्रकारहरु तपाइँ एक आधार बाट एक फ्लिप फिर्ता armrest वा डेस्क लम्बाइ को लागी स्थानान्तरण गर्न को लागी र सजीलै भित्र र बाहिर बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। Karman मा, हामी म्यानुअल व्हीलचेयर को लागी छनौट गर्न को लागी १०० भन्दा बढी मोडेलहरु छन्। सामान्य मा, यदि तपाइँ आफैलाई एक व्हीलचेयर मा प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ सबैभन्दा हल्का सबैभन्दा सहज व्हीलचेयर उपलब्ध चाहानुहुन्छ। उपलब्ध सबै कोटिहरु को बारे मा अधिक जान्नुहोस् र त्यसपछि उत्पादन वजन र बजेट द्वारा छनौट गर्नुहोस्। यहाँ केहि श्रेणीहरु र तपाइँको समीक्षा को लागी जानकारी छन्: